Prototype ndege inopunzika muRussia ichiuraya vanhu vese vari mungarava
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Russia Kuputsa Nhau » Prototype ndege inopunzika muRussia ichiuraya vanhu vese vari mungarava
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • nhau • Russia Kuputsa Nhau • chengetedzo • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Ndege yakarasikirwa netambo yekumhara nemakiromita 1.5 (0.9 mamaira) ndokuputika pakurovera kwayo nepasi.
Ndege tsaona padhuze neMoscow.
Ndege nyowani yekuRussia yekufambisa mauto inotsva uye kurovera parwendo rwekutanga.
Hapana vakapona mukuparara kwendege yeMoscow.
Ndege nyowani yekufambisa yeRussia yadonha panguva yekuyedza kubhururuka payakaedza kumhara panhandare yemhepo yeKubinka kunze kweMoscow, ichiuraya vanhu vatatu vari muchikepe.
Ndege yakapotsa mutsetse wekumhara nemakiromita 1.5 (0.9 mamaira) ndokuputika pakurovera kwayo nepasi.
Zvinoenderana nedhata rekutanga, tsaona yakakonzerwa nemoto muinjini yekurudyi-ndege.
Mugadziri wendege, United Aircraft Corporation, asimbisa tsaona iyi, achiti ndege iyi isati yarova, injini yekurudyi yakatsva, zvichikonzera iyo Il-112V kutenderera kurudyi. Ndege yakatanga kurasikirwa nespeed isati yapinduka ichidonhera pasi padhuze Kubinka air base.
United Aircraft Corporation (UAC) yakashuma kuti ndege iyi yakaedzwa nemutyairi mukuru weIlyushin Aircraft Company, 1st -class test pilot, Gamba reRussia Nikolai Kuimov, 1st-kirasi bvunzo mutyairi Dmitry Komarov uye 1-kirasi yekuyedza ndege yekumhanya Nikolai Khludeyev .
Rostec, kambani yemubereki yeUnited Aircraft Corporation, yakazivisa kuti yaizogadzira komisheni yekuongorora tsaona iyi, ichiona kuti ichiri muchikamu chekuyedza.
Sekureva kwesosi mukuchengetedzwa kwemutemo, mitumbi yevose vatatu vashandi veRussia yazvino Ilyushin Il-112V ndege yakawanikwa.
Aviation indasitiri sosi yakati vashandi veLyushin Il-112V vaiedza kuponesa ndege kusvika nguva yekupedzisira uye vakamisa ndege kure nezvivakwa zvekugara.